Abakhiqizi be-Nandrolone Decanoate (DECA) neFektri - Abasebenza
I-Raw Nandrolone Decanoate (DECA) i-powder, eyaziwa nangokuthi i-19-nortestosterone, i-androgen ne-anabolic steroid (AAS) esetshenziswe ngesimo se-esters njenge-nandrolone decanoate (igama elithi brand Deca-Durabolin) ne-nandrolonephenylpropionate (igama lomshini uDurabolin) .
I-Raw Nandrolone Decanoate (DECA) i powder (i-360-70-3) ividiyo
I-Raw Nandrolone Decanoate (DECA) powder (360-70-3) Incazelo
Ngokusobala i-Nandrolone Decanoate powder eyaziwa kakhulu yi-steroid yesibili eyaziwa kakhulu ngemva kwe-Testosterone. Leli qembu le-anabolic lilinganiswa njengenye yezidakamizwa ezingcono kakhulu zokulondoloza ubuhlungu obukhulu bomzimba nokukhuthaza ukudla. I-anabolic androgenic steroid ezuze ukwamukelwa okukhulu phakathi kwama-bodybuilders abaqeqeshiwe nabadlali.
Ekuqaleni yakhelwe ukuphatha abantu abathintekayo abanesisindo sokuqeda izifo, i-Raw Nandrolone Decanoate (DECA) i-powder enekhono lokuthuthukisa ubukhulu bamathambo nokukhula kwemisipha. Ukusetshenziswa kwaleli steroid isikhathi esingamaviki ayisithupha ukuya kweziyisishiyagalolunye kuhlotshaniswa nokwanda okwenyuka ekukhiqizeni amaseli abomvu nokuphulukisa izinkinga ezihlangene ezenzeka ngabathile abathile ngesikhathi sokusebenza okukhulu. Le steroid ngokuvamile isetshenziselwa ukuzuza okuningi noma izigaba zokudliwa futhi ingenye ye-steroid embalwa kakhulu engasetshenziswa kokubili ngenkathi yangaphandle futhi ngaphambi komncintiswano ochwepheshe.
I-Raw Nandrolone Decanoate (DECA) i powder Siziqu
Igama Product I-Raw Nandrolone Decanoate (DECA) i powder
Brand NAme I-Deca-Durabolin
CAS Inombolo 360-70-3
I-molecular Fi-ormula C28H44O3
I-molecular Weziyisishiyagalombili 428.65
IMisa ye-Monoisotopic I-428.329 g / mol
Ukuxuba Pi-oint I-33-37 ° C
Iphuzu lokubilisa I-483.46 ° C (ukulinganisa okulinganiselwe)
Color I-White kuya ekukhanyeni i-powder ephuzi ephuzi
Aukuphikisana Ekuqaleni ithuthukiswe ukuphatha abantu abathintekayo abanesisindo sokuqeda izifo, iNandrolone Decanoate inekhono lokuthuthukisa amathambo kanye nokukhula kwemisipha nokuthuthukisa kakhulu amaprotheni synthesis, ukugcinwa kwe-nitrogen, ukusebenza nokukhuthazela.
Iyini i-Raw Nandrolone Decanoate (DECA) powder (360-70-3)?
Isisekelo se-Nandrolone ngokuvamile sihlanganiswa kusuka kumsolwa wesilisa wokukhiqiza i-hormone testosterone. Kungasiza ukuvuselela izicubu zomzimba, ukwandisa umzimba nomzimba wamathambo futhi ukhuthaze ukwakhiwa kwamaseli abomvu asemvu. Futhi kungenza ukukhula kwemisipha, ukugqugquzela ukudla futhi ukwandise ukukhiqizwa kwegazi elibomvu kanye nethambo lamathambo. Ucwaningo lwezokwelapha luye lwabonisa ukuthi lusebenza kahle ekwelapheni i-anemia, i-osteoporosis kanye nezinye izinhlobo ze-neoplasia kufaka phakathi umdlavuza webele, futhi zenza njengendlela yokuvimbela isisu se-progesin. I-Nandrolone ivame ukuthengiswa ngokuthengisa njenge-decanoate ester (i-Deca-Durabolin) futhi engavamile njenge-phenylpropionate ester (Durabolin).
Indlela i-Raw Nandrolone Decanoate (DECA) ephola ngayo (360-70-3) Isebenza
I-Nandrolone powder eluhlaza i-steroid ya-anabolic. Isebenza ngokukhulisa ukukhula kwamathekithi athile emzimbeni futhi iboniswe ukuthuthukisa ikhono eliphethe i-oxygen ngokwandisa i-hemoglobin nobukhulu bamaseli abomvu obomvu.
I-Raw Nandrolone Decanoate (DECA) powder (360-70-3) Usetshenziswa
Ukusetshenziswa kwezokwelapha eNandrolone
I-Nandrolone nayo isetshenziselwe ukwelapha i-osteoporosis kwabesifazane, ngokusho koMnyango Wezokwelapha Umhlahlandlela Wodokotela. I-Nandrolone ithuthukisa inhlanganisela ye-collagen emzimbeni futhi ibuyisela ukulinganisela komzimba we-calcium ngokuqinisa amaminerali amathambo. I-Nandrolone nayo isetshenziselwe ukwelapha umdlavuza webele futhi ukunciphisa izimpawu ze-AIDS, ngokusho kweWiley InterScience website. Lokhu kwenza lokhu ngokusiza ekuvimbeleni ukunqotshwa kwamandla omzimba namandla omzimba okuvame ukulimaza iziguli ze-AIDS.
I-Raw Nandrolone Decanoate (DECA) powder (360-70-3) Izinzuzo
I-Nandrolone iphumelela ekwandiseni ithoni ye-muscle nobuningi. Ukwenza lokhu ngokusiza umzimba ukuthi usebenzise noma yikuphi amaprotheni adliwe ngokuphumelelayo. Imiphumela ngokuvamile yesikhashana futhi ukudla okuphakeme kakhulu amaprotheni kuyadingeka ukwakha ithoni ye-muscle ngokwanele. I-Nandrolone inganciphisa izikhathi zokuphumula ngokulimala futhi ukwandise amazinga okuqina ngokunciphisa ukukhathala emva kokusebenza. Lokhu kwenza ngokukhuphula izinga lokuhlukunyezwa kwe-muscle emva kokulawulwa okunzima kokuzivocavoca. Lokhu kusho ukuthi abagijimi bangaqeqesha isikhathi eside ngaphandle kokukhathala. Ukusetshenziswa kweNandrolone akuyona nje umkhiqizo othandwayo phakathi kwabalimi bomzimba, kodwa futhi usebenza kahle ekwelapheni izimo ezehlukene zempilo. Imiphumela emihle yalesi sidakamizwa ihlanganisa ukukhula kwe-muscle, ukugqugquzela ukudla kanye nokunyuka kwegazi elibomvu nokukhiqizwa kwamathambo. Ucwaningo lwezokwelapha luye lwabonisa ukuthi lusebenza kahle ekwelapheni i-anemia, i-osteoporosis kanye nezinye izinhlobo ze-neoplasia kufaka phakathi umdlavuza webele, futhi zenza njengendlela yokuvimbela isisu se-progesin.
Thenga i-powder ye-Nandrolone Decanoate (DECA) (360-70-3) esuka ku-Buyaas.com
Ukusetshenziswa kwe-Nandrolone Decanoate, Umjikelezo, Isilinganiso, kanye Nemiphumela Ethuthumayo
I-Anabolic Therapy In Medicine Yanamuhla, uWilliam N. Taylor. MD, ikhasi 75-120
Izidakamizwa, abadlali, kanye nokusebenza ngokomzimba, okuhlelwe nguJohn A. Thomas, Ikhasi 27-30
I-osteoporosis: i-Pathogenesis ne-Management, ehlelwe ngu-RM Francis, ikhasi 101-130
I-Raw Dehydronandrolon powder (i-2590-41-2)